Ciudadanos wuxuu soo jeedinayaa isbeddelo ku yimaada NHP si uu ula qabsado isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Iyagoo wajahaya xaalada abaarta ee Spain ay la ildaran tahay, kooxda baarlamaanka ee Ciudadanos waxay soo bandhigeen soo jeedin aan sharci ahayn (NLP) si dib u habeyn loogu sameeyo loona waafajiyo Qorshaha Qaranka ee Hydrological si isbedelka cimilada. Dib-u-habayntani waxay leeyihiin geedi socod ballaaran oo ka-qaybgalka bulshada.
Sideed u dooneysaa inaad dib-u-habeyn ugu sameyso Qorshaha Hydrological Plan-ka iyadoo ay wajahayaan xaalado abaareed oo xun oo uu sababo isbedelka cimilada
1 La qabsiga isbedelka cimilada iyo amniga biyaha
2 Meelaha dhaqdhaqaaqa
La qabsiga isbedelka cimilada iyo amniga biyaha
Waa muhiimad weyn in la damaanad qaado amniga biyaha dalka oo dhan. Iyadoo wajahaysa xaaladda ay keeneen isbeddelka cimilada oo ay ku kordheen soo noqnoqoshada iyo xoojinta abaarta (waxaan horay u aragnay in 2017 uu ahaa sanadkii labaad ee ugu qalalan uguna diirimaad badnaa tan iyo 1965), Ciudadanos wuxuu soo jeedinayaa tilmaamo taxane ah si loo waafajiyo Qorshaha Biyo-biyoodka Qaranka.
Afhayeenka doodda ee Guddiga Isbedelka Cimilada, Melisa Rodríguez, Wuxuu xaqiijiyay in kululaynta caalamiga ay tahay qatar ay tahay in si dhab ah loo qaato, maadaama aan horeyba u aragnay natiijooyinka. Si wax looga qabto danta dhammaan muwaadiniinta Isbaanishka, waxaa muhiim ah in la abuuro lana horumariyo hab cusboonaysiin ah oo ku saabsan siyaasaddii hore ee ka jirtay biyaha dalka.
Soo jeedimaha waxqabadka ee la qabsiga isbedelka cimilada waa in lagu sameeyaa laba qaybood: muddo-gaaban, 2030, iyo muddo-dheer, sannadka 2050-ka.
Ka sokow xaqiijinta amniga biyaha dalka, waa in lagu sameeyaa qiimo macquul ah. Waxqabadyadu waa inay ka gudbaan xaaladaha xun ee keenaya isbeddelka cimilada, keliya maahan abaarta, laakiin sidoo kale waxay sabab u tahay heerkulka oo kordhay, roobab mahiigaan ah iyo uumi bax iyo dabka kaynta oo kordhay.
NLP ma soo jeedinayso tallaabooyin gaar ah, laakiin waxay soo jeedineysaa toban meelood oo ficil ah, oo ay ku jiraan qeexitaanka qaran ee ilaha biyaha ee macnaha guud ee hubin la'aanta cimilada; dayactirka iyo ilaalinta shaqooyinka Haydarooliga iyo rakibidda adeegga; macaaneyn; kharashaadka biyaha ama iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee waaxda biyaha.
Meelaha waxqabadka ee ay soo jeediyeen Muwaadiniinta in dib loogu habeeyo Qorshaha Biyo-biyoodka ayaa ah kuwa soo socda:
Ku qiimee biyaha sida ay lagama maarmaanka u yihiin, uguna yar yihiin wanaagsanaanta dadweynaha iyo dabeecadeeda dhaqaale, iyada oo loo marayo aqoonsiga, ogaanshaha iyo qiimeynta helitaanka iyo dhibaatooyinka ay tahay inaan wajaho isbedelka cimilada.
Dib-u-habeyn loogu sameeyo qalabka maamul wax ku ool ah iyo maareynta biyaha iyadoo lagu saleynayo hubin la'aanta cimilada. Tani waxay kor u qaadaysaa dhibaatooyin fara badan xiriirka ka dhexeeya biyo mareenka biyo-mareenka iyo maamullada guud ee beel kasta oo iskeed u degta.
Laqabso dhamaan kaabayaasha dhaqaalaha halkaasoo biyaha lagu kaydiyo laguna daabulo shuruudaha looga baahan yahay isbeddelka cimilada. Tallaabooyinka sida dib-u-habeynta kaabayaasha iyo beddelidda howlaha heerarka qaarkood ayaa la soo ururiyaa.
Joogtee oo ilaali shaqooyinka iyo tas-hiilaadka adeegyada, ee la xiriirta shuruudaha amniga iyo adkeysiga ee nidaamka haydarooliga. Feejignaan gaar ah ayaa loo yeelay kaydadka (qashin-qubka, ka-hortagga biyo-xireennada iyo badbaadada biyo-xireennada) iyo nidaamyada qaybinta (xakamaynta khasaaraha).
Kordhi wax soo saarka biyo aan dabiici ahayn gudaha Isbaanishka, sida kan ka imanaya milayga. Hagaajinta waxsoosaarka iyo kharashaadka macaaneynta biyaha. Dhiirrigelinta adeegsiga biyaha wasakhda ah ee dib loo soo isticmaalay isticmaal aan ka ahayn isticmaalka aadanaha.
La iskaashi dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay qaybta biyaha. Doorkeeda ku aaddan bixinta hufan ee kaabayaasha Haydarooliga, howlaheeda iyo maaraynta isticmaalka. Nidaaminta sharciga. Biyaha, horumarka iyo qaabka dhaqaalaha.
Kordhinta maaraynta adeegyada biyaha magaalooyinka.
Jaangooyo kharashka iyo qiimaha biyaha.
Kordhi hal-abuurnimada iyo horumarinta teknoolojiyada hagaajiya wareegga biyaha iyo isticmaalka biyaha, maareynta iyo hagaajinta biyo-mareennada iyadoo la qorsheynayo dalag wanaagsan.
Ka dhalinta korantada biyaha kaydsan si loogu daro kala-guurka tamarta Isbaanishka.
Iyada oo dhammaan aaladahaan wax laga qabanayo, Ciudadanos waxa uu rajeynayaa in uu awood u yeesho in uu hagaajiyo Qorshaha Biyo-biyoodka Qaranka ee wajahaya is-beddelka cimilada, maaddaama ay sii kordheyso wax laga naxo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Ciudadanos wuxuu soo jeedinayaa isbeddelada PHN si uu ula qabsado isbeddelka cimilada
Sideed gacan uga geysan kartaa xakameynta isbeddelka cimilada?
Sharoobada Maple waxay noqon kartaa dhibbane cusub oo isbeddelka cimilada